जानी राखौँ , घरमै यसरी गर्नुहोस जन्डिसको उपचार - Rochak Khabar
जानी राखौँ , घरमै यसरी गर्नुहोस जन्डिसको उपचार
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २८, २०७४ समय: २२:४०:२४
जन्डिस आफैँमा रोग होइन, बरु एउटा गहिरो रोगको लक्षण हो । जन्डिस भएपछि कलेजो विग्रने र भाइरल हेपटाइटिस हुने गर्छ जसको उपचार निकै कठिन मानिन्छ । मलेरिया, हेपटाइटिस ए लगायतका रोगका कारण पनि जन्डिस हुने गर्छ । प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गर्न सकेमा कतिपय अवस्थामा जन्डिसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । जन्डिस उपचारका केही प्रमाणित घरेलु उपाय यस्ता छन् ।
मेवाको पातः एक चम्चा महलाई एक चिया चम्चा मेवाको पातको पेस्टमा मिसाएर खानुहोस् । यसको सेवन जन्डिसका लागि निकै प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।
उखुमा भएको तत्वहरुले जन्डिसका रोगीले खाएको खानेकुरा वा जुस पचाउन सहयोग गर्नुका साथै कलेजोलाई उचित रुपमा काम गर्न सहयोग पुर्याई बिरामीलाई जन्डिसबाट मुक्त हुन सहयोग पुयाउछ । एक गिलास उखुको जुस नियमित पिउनुहोस् । दुई सातामै सकरात्मक नतिजा आउँछ । जुस निकाल्नुअघि उखुलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् ।
ग्रोजबेरीमा भिटामिन सी पर्याप्त पाइन्छ । जन्डिसको लक्षणहरु अन्त्य गर्न वा जन्डिस भइसकेपछि पनि यसबाट मुक्त पाउन यसले निकै सहयोग पुर्याउछ ।
सात देखि १० ओटा चिचिन्डाका पात लिनुहोस् र एक कप पानीमा मिसाएर उमालेर चिसो बनाउनुहोस् । सेलाएपछि दिनमा कम्तिमा तीन गिलास पिउनुहोस्, जन्डिसबाट केही हदसम्म मुक्ति मिल्न सक्छ ।
यो आफैमा औषधी हो। कलेजोको रोग उपचारका लागि कसनीका सबै भाग जस्तै फुल, विया, जरा र बोक्रा समेत प्रयोग हुन्छ । यसको जुस पिउनाले कलेजोेलाई सक्रीय रुपमा काम गर्छ ।
पाकेको केरालाई मुठिले मिच्नुहोस, केही मह मिसाउनुहोस र दिनमा कम्तिमा पनि दुई पटक खानुहोस् । जण्डिस उपचारमा यो विधि आयुर्बेदमा पनि निकै प्रयोग भएको पाइन्छ ।
गाँजरको ताजा जुस बनाउनुहोस् र दिनमा पाँच सात पटक पिउनुहोस् । गाँजरका टुक्रालाई रोगीले खाने खानामा समेत मिलाए दिनुपर्छ ।स्वास्थ्य खबरपत्रिका
महिला र पुरुष कुनमा बढि यौन इच्छा हुन्छ ? जानी राखौँ
यौन चाहना महिला भन्दा बढी पुरुषमा हुन्छ । यो जन्मजात गुण हो । पुरुषमा हार्माेनहरु उत्तेजित हुने भएकाले यौन उत्तेजना पनि ...
स्तन ठुलो बनाउने यस्तो घरेलु उपाय जानी राखौँ
तपाई आफ्नो स्तनको आकार सानो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । स्तनको बृद्धि विकास नहुँदा कयौ महिलाहरू चि...
के हस्तमैथुनले स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ ?
सबैभन्दा पहिले हस्तमैथुनबारे जानौँ । हातले अथवा केही साधन प्रयोग गरेर, यौनाङ्ग चलाएर, हल्लाएर वा खेलाएर यौन सन्तुष्टि प्...
योनिच्छेद फाटेको छ ? कुमारी होईन भन्नु गलत
काठमाडौं । साधारणतयाः योनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी भन्दछन् । योनिच्छेद नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ, जुन स्त्रीको...
होसियार ! कुनै लक्षण नदेखिई बिग्रिन सक्छ मिर्गौला
मिर्गौला बिग्रिएर जीवनमा तनाव भोगेका व्यक्ति धेरै भेटिन्छन् । विभिन्न कारणले मिर्गौला बिग्रिन्छ । तर, समस्या के भने कुनै...
ग्यास्ट्रिक बढ्यो ? घरमै हुने सामान्य उपचारबाट क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ
अनियमित जीवनशैली र खराब खानपानका कारण एसिडिटी बढेर दुःख पाउनु आधुनिक जीवनशैली अपनाउने हामी सबैका लागि सामान्य कुरा हो । ...